ရွာထောင် ဒီဇယ်စက်ခေါင်းစက်ရုံ | Myanma Railways
Mechnical&Electrical/ ရွာထောင် ဒီဇယ်စက်ခေါင်းစက်ရုံ
- (၄၃.၀၄ ဧက)
စက်ရုံနယ်မြေဧရိယာ - လူနေအိမ်အပါအဝင်စက်ရုံနယ်နိမိတ် ၂၉၂.၉၀ ဧက
(က) အဆောက်အဦတန်ဖိုး - ကျပ်ငွေ ၂၄.၈၀ သန်း
( ခ ) စက်ကိရိယာတန်ဖိုး - ကျပ်ငွေ ၂၇.၀၀ သန်း
စုစုပေါင်းတန်ဖိုး - ကျပ်ငွေ ၅၁.၈၀ သန်း
၅။ စက်ရုံတွင်ပါဝင်သော အဆောက်အဦများမှာ -
( ခ ) ပြုပြင်မှုပိုင်းဆိုင်ရာအဆောက်အဦများ
( ခ ခ ) ဒီဇယ်လျှပ်စစ်ရုံ
( စ စ ) ဘိုဂီရုံ
( ဇ ဇ ) ထရန်စမစ်ရှင်းရုံ
( ဂ ) ထုတ်လုပ်မှုပိုင်းဆိုင်ရာအဆောက်အဦများ
၆။ ဒီဇယ်စက်ခေါင်းစက်ရုံ၊ရွာထောင်၏ ရည်မှန်းချက်တာဝန်များမှာ -
(က) ဒီဇယ်စက်ခေါင်းများအား အကြီးတန်း(M-8)မွမ်းမံပြင်ဆင်ရန်၊
၇။ စက်ရုံ အထွေထွေမန်နေဂျာတစ်ဦးပါဝင်သော အရာရှိ ၊ ကြီးကြပ်ရေးဝန်ထမ်း ၊ အခြား ဝန်ထမ်းများကို ခန့်ထား၍ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ ဖွဲ့စည်းပုံအင်အားနှင့် လက်ရှိခန့်အပ်ပြီး ဝန်ထမ်း အခြေအနေမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည် -
၈။ ဒီဇယ်စက်ခေါင်းစက်ရုံ၊ရွာထောင်၌ မြန်မာ့မီးရထား၌ လိုအပ်လျှက်ရှိသော စက်ခေါင်းများအား အကြီးတန်းပြုပြင်ခြင်း ၊ အလတ်တန်းပြုပြင်ခြင်း စသည့် မွမ်းမံမှုများပြုလုပ်သည့်အပြင် အသုံးပြု သက်တမ်းကြာမြင့်သောစက်ခေါင်းများအား Engine အသစ်တင်ကာ စွမ်းအားမြှင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်း များလည်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ထို့အပြင် အသုံးမပြုတော့သည့် စက်ခေါင်းများမှ အရန်ပစ္စည်းများ အားပြုပြင်မွမ်းမံ၍ ဆယ်တင်ပစ္စည်းအဖြစ်ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း၊ အရန်ပစ္စည်းအမယ်သစ်များတီထွင် ထုတ်လုပ်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်ကာ မြန်မာ့မီးရထားအတွက်လိုအပ်လျှက်ရှိသော စက်ခေါင်းငယ်များ ၊ ဌာနသုံး သံလမ်းပြေးယာဥ်များတည်ဆောက်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းတို့မှာ -
(၁) LRBE (Loco Rail Bus Engine)ခရီးတိုစက်ခေါင်း(၈)ခေါင်းတည်ဆောက် ခြင်း
(၁) DD 901 စက်ခေါင်းအား CAT 3508 အင်ဂျင်ဖြင့် စွမ်းအားဖြည့်တင်းခြင်း
DD 901 KRUPP စက်ခေါင်းမှာ ယခင်က MAN အင်ဂျင် တပ်ဆင်ထားပြီး ၎င်း အင်ဂျင်မှာ သက်တမ်းကျော်လွန်ပြီး ပြုပြင်သုံးစွဲ၍ မရပါသဖြင့် Caterpiller 3508 Engine အား လက်ရှိ အသုံးပြုနေသော ထရန်စမစ်ရှင်းဝန်အားနှင့် တွက်ချက်ပြီး ၄င်းတို့နှစ်ခု ချိတ်ဆက် နိုင်အောင် Adaptor များ ပြုလုပ်တပ်ဆင်၍ တည်ဆောက်ခဲ့ရာ ၂၀၀၇-ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။ Repower ပြုလုပ်ရန်အတွက် CAT Engine ဝယ်ယူခြင်း ၊ Frame Design ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်း ၊ Engine Foundation ပြောင်းလဲခြင်း၊ အသစ် တပ်ဆင်မည့် CAT Engine နှင့် လိုက်လျောညီထွေ ဖြစ်မည့် Cooling Group တည်ဆောက်ခြင်း ၊ Driver Cab Design အား ပြောင်းလဲခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ရပါသည်။
ဒီဇယ်စက်ခေါင်းစက်ရုံ၊ ရွာထောင်အနေဖြင့် ၁၉၉၂-၁၉၉၃ ခုနှစ်တွင် မြန်မာ့မီးရထား၏ ပထမဦးဆုံးတည်ဆောက်ခဲ့သော D1B 301 စက်ခေါင်းကို စတင်
တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ စက်ခေါင်းကို တည်ဆောက်ရာတွင် နိုင်ငံခြားမှ EF 350 Hino Engine တစ်မျိုးကိုသာ မှာယူ၍ ကျန် စက်ခေါင်းဆိုင်ရာ ပစ္စည်းများကို မြန်မာ့မီးရထားမှ အသုံးမပြုတော့သည့် ပစ္စည်းများအား ပြုပြင်မွမ်းမံ၍ ဆယ်တင်ပစ္စည်းအဖြစ် ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း၊ အရန်ပစ္စည်း အသစ်များ တီထွင် ထုတ်လုပ်တပ်ဆင်ခြင်းတို့ပြုလုပ်ကာ တည်ဆောက်ခဲ့ပါသည်။
၁၉၉၃-၁၉၉၄ ခုနှစ်တွင်လည်း D1B 302, D1B 303, D1B 304 စက်ခေါင်းများကို (၁)နှစ်အတွင်း အပြီး တည်ဆောက်ခဲ့ပါသည်။ တည်ဆောက်ခဲ့သော စက်ခေါင်းများကို မန္တလေး စက်ရုံသို့ အပ်နှံခဲ့ပြီး ချောင်းဦး-မကျီးဘုတ်လမ်းပိုင်း ၊ ပခုက္ကူ-မင်းရွာလမ်းပိုင်း ၊ မိုးကောင်း- မြစ်ကြီးနားလမ်းပိုင်းတို့တွင် ပြေးဆွဲအသုံးပြုနိုင်ခဲ့ပါသည်။
(1) D1B 301 - 1993
(2) D1B 302 - 1993
(3) D1B 303 - 1993
(4) D1B 304 - 1993
Diesel Engine Rating - 300 HP
Overall Length - 32' 7"
Overall Width - 8'
Max: Height - 10' 10"
Tare Weight - 15 Tons
Max: Speed - 25 mph
၁၉၉၄-၁၉၉၅ ခုနှစ် တွင် Diesel Car Armoured (DCA) ကို သံလမ်းပြေးယာဥ် DCL (Diesel Car Loco) အဖြစ် ပုံစံပြောင်း၍ တီထွင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ DCL 8512 အား ၂၃.၁.၁၉၉၅ တွင် လည်းကောင်း ၊ DCL 8517 အား ၁၁.၇.၁၉၉၅ တွင် လည်းကောင်း တည်ဆောက်ပြီးစီးခဲ့ပြီး ကျော-ဇီးပြားလမ်းပိုင်း၊ မြို့ဟောင်း-မုံရွာလမ်းပိုင်းများတွင် အသုံးပြုနိုင် ခဲ့ပါသည်။
(1) DCL 8512 - 1995
(2) DCL 8517 - 1995
Diesel Engine Rating - 75 HP
Overall Length - 21' 3"
Overall Width - 7' 10"
Max: Height - 9' 1"
Tare Weight - 5.6 Tons
Max: Speed - 30 mph
ဆယ်တင်ပစ္စည်းများကို အသုံးပြု၍ မြင်းကောင်ရေ ၃၀၀ အားရှိ DB 302 စက်ခေါင်း ကို ၁၉၉၆-၁၉၉၇ခုနှစ်တွင် တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး ရန်ကုန်မြို့၊ မြန်မာ့စက်မှုပြပွဲတွင် ခင်းကျင်းပြသ နိုင်ခဲ့ပါသည်။မြန်မာ့မီးရထား၏တွဲရွှေ့စက်ခေါင်းလိုအပ်ချက်အား ပြည်ပမှနိုင်ငံခြားငွေအသုံးပြု ကာဝယ်ယူခြင်းမပြုဘဲ ဒီဇယ်စက်ခေါင်းစက်ရုံ၊ရွာထောင်၌ပင် လိုအပ်သော အရန်ပစ္စည်းများ အား တီထွင်ထုတ်လုပ်ခြင်း ၊ အသုံးမပြုတော့သော အရန်ပစ္စည်းများကို Modified ပြုလုပ်ကာ ဆယ်တင်ပစ္စည်းအဖြစ် ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း တို့ဖြင့် DB 302 စက်ခေါင်းကို တည်ဆောက်ခဲ့ ပါသည်။ DB 303 စက်ခေါင်းကို ၁၉၉၇-၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင် တည်ဆောက်၍ တွဲရွှေ့လုပ်ငန်းများ၌ အသုံးပြုနိုင်ခဲ့ပါသည်။
(1) DB 302 - 1996 (3) DB 304 - 2011
(2) DB 303 - 1998 (4) DB 305 - 2012
Overall Length - 31' 8"
Overall Width - 9'
Tare Weight - 20 Tons
Max: Speed - 15 mph
DB 304 နှင့် DB 305 စက်ခေါင်းများ တည်ဆောက်ရာတွင် Korea နိုင်ငံ ၊ Daewoo Company မှ ထုတ်လုပ်ထားသော DB 301 စက်ခေါင်း၏ ပုံစံအတိုင်း နမူနာယူကာ ယခင် DB 302 , DB 303 စက်ခေါင်းတို့၏ အားနည်းချက် နှင့် အားသာချက်များကို နမူနာယူပြီး အကောင်းဆုံးနှင့် အမြန်ဆုံး တည်ဆောက်နိုင်ရန် ဒီဇယ်စက်ခေါင်းစက်ရုံ၊ရွာထောင်၌ပင် လိုအပ်သော အရန်ပစ္စည်းများအား တီထွင်ထုတ်လုပ်ခြင်း ၊ အသုံးမပြုတော့သော အရန်ပစ္စည်း များကို Modified ပြုလုပ်ကာ ဆယ်တင်ပစ္စည်းအဖြစ် ပြန်လည် အသုံးပြုခြင်း တို့ဖြင့် အောက်ပါအတိုင်း အဆင့်ဆင့် ပြုလုပ်တည်ဆောက်ခဲ့၍ တွဲရွှေ့လုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုနိုင်ခဲ့ ပါသည် -
( ခ ) Transmission ရွေးချယ်အသုံးပြု၍ Reversing Gear Box ပြုလုပ်ခြင်း၊
( ဂ ) Cooling Unit ပြုလုပ်ခြင်း၊
(ဃ ) Driving Axle တည်ဆောက်ခြင်း၊
( င ) Auxiliary Parts များတည်ဆောက်ခြင်း၊
( စ ) Wiring နှင့် Electrical Parts များတပ်ဆင်ခြင်း၊
(ဆ ) Loco Frame နှင့် Body Work များ အသစ်တည်ဆောက်ခြင်း၊
( ဇ ) တည်ဆောက်ပြီး အစိတ်အပိုင်းများအား ဆေးသုတ်ခြင်း၊တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် မောင်းနှင်စမ်းသပ်ခြင်း၊
Engine Rating - 550 PS / 2200 rpm
Max: Height - 10′ 10 7/16"
Overall Width - 8′63/8"
Length Over Buffer - 26′511/16"
Tare Weight - 24 Ton
Max: Speed - 20 mph
ပြည်တွင်းသောင်းကျန်းမှုကာလက ရထားလမ်းပေါ်တွင် ကင်းလှည့်နိုင်ရန် အသုံးပြုခဲ့ သည့် Diesel Car Armoured (DCA) ၏ အောက်ခံ Frame နှင့် Driving စနစ်ကို ပြန်လည် အသုံးပြု၍ ပြည်တွင်းမှ ဝယ်ယူရရှိသော Engine အား အသုံးပြုလျှက် ခေတ်မီ လှပသော ဒီဇိုင်းပုံစံဖြင့် လေအေးပေးစနစ်ပါ အသုံးပြုနိုင်သော သံလမ်းပြေးယာဥ်တည်ဆောက်ရန် တာဝန်ပေးချက်အရ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များအတွက်လည်းကောင်း၊ဌာနဆိုင်ရာ အကြီးအကဲ များ ရထားလမ်း စစ်ဆေးစဥ် အသုံးပြုရန်အတွက်လည်းကောင်း ရည်ရွယ်၍ သံလမ်းပြေးကား Diesel Rail Car (DRC) (၂)စီး ကို ၂၀၀၁-၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင် အောင်မြင်စွာ တည်ဆောက်ပေး နိုင်ခဲ့ပါသည်။
(1) DRC 101 - 2001
(2) DRC 102 - 2002
Diesel Engine Rating - 120 HP
Overall Length - 23'
Max: Height - 9' 9"
Tare Weight - 8 Tons
Seating Capacity - 18 Persons
Max: Speed - 35 mph
( ဂ ) မြင်းကောင်ရေ ၁၁၀၀ အား ဒီဇယ်အင်ဂျင်(၂)လုံး ပါရှိသော မြင်းကောင်ရေ ၂၂၀၀ အား စက်ခေါင်းများကို မြင်းကောင်ရေ ၁၁၀၀ အားရှိ စက်ခေါင်း(၂)လုံး ရရှိစေရန် ခွဲ၍ တည်ဆောက်ခြင်း
ရထားပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး ၊ ဒု-ဝန်ကြီးတို့၏ လမ်းညွှန်မှုအရ စက်ခေါင်းများအား ပြည်တွင်း၌တည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ရှေးဦးလေ့ကျင့်မှုတစ်ရပ်အဖြစ် ဂျပန်နိုင်ငံလုပ်မြင်းကောင်ရေ (၂၂၀၀)အား တစ်ပတ်ရစ် ဒီဇယ်စက်ခေါင်း တစ်ခေါင်းအား မိမိလမ်းပိုင်းတွင် အကျိုးရှိစွာ အသုံးပြု နိုင်မည့်မြင်းကောင်ရေ(၁၁၀၀)အား စက်ခေါင်း(၂)ခေါင်းအဖြစ်ပြောင်းလဲ တည်ဆောက်နိုင်ရန် စတင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
(၁) ပထမ ၁၁၀၀ မြင်းကောင်ရေအား DD1102စက်ခေါင်းအဖြစ်ပြောင်းလဲတည်ဆောက်ခြင်း
မူရင်း ၂၂၀၀ မြင်းကောင်ရေအား စက်ခေါင်းတွင် ၁၁၀၀ မြင်းကောင်ရေအား အင်ဂျင် (၁)လုံး၊ ထရန်စမစ်ရှင်း(၁)စုံ၊ အအေးပြုယူနစ်(၁)စုံ မှာ စက်မောင်းခန်း၏ တဖက်တချက်စီ၌ ပါရှိပါသည်။ ဘိုဂီမှာ(၃)လုံးပါရှိပြီး အစွန်း နှစ်ဖက်ရှိ ဘိုဂီများမှာ ဘီးလှည့်ပင်နယံ (Drive Pinion)များ တပ်ဆင်ထားပြီး အလယ်ဘိုဂီမှာ ဘီးလှည့် ပင်နီယံ (Drive Pinion) များမပါရှိဘဲ အကူဘိုဂီအဖြစ် သုံးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ၁၁၀၀ မြင်းကောင်ရေအား ပထမ စက်ခေါင်း တည်ဆောက်ရန်အတွက် မူရင်းစက်ခေါင်း ဖရိန်နှင့် ကိုယ်ထည်ပိုင်းအား ပြန်လည် အသုံးပြုရ မည်ဖြစ်ရာ Drive Pinion ပါ မူရင်းဘိုဂီ၏ ဗဟိုချက် အကွာအဝေး Centre Distance နှင့် Carden Shaft ၏ မူရင်း အတိုင်းအတာ မပျက်စေဘဲ တည်ဆောက်ခဲ့ပါသည်။ ထို DD 1102 ပထမစက်ခေါင်းကို ၂၀၀၆-ခုနှစ် တွင် အပြီးတည်ဆောက်ခဲ့ပါသည်။
(၂) ဒုတိယ ၁၁၀၀ မြင်းကောင်ရေအား DD 912စက်ခေါင်းအဖြစ်ပြောင်းလဲတည်ဆောက်ခြင်း
မူရင်းဂျပန် ၂၂၀၀ မြင်းကောင်ရေအား တစ်ပတ်ရစ် စက်ခေါင်းမှ ထွက်လာသော ၁၁၀၀ မြင်းကောင်ရေအား အင်ဂျင် ၊ ထရန်စမစ်ရှင်း ၊ အအေးပြုယူနစ် နှင့် စက်ခေါင်း (Driving Desk) ခုံ တို့အား စက်ခေါင်းရုံတွင် အရန်ပစ္စည်း စောင့်ဆိုင်းနေသော K.S.K အမျိုးအစား ဂျပန်စက်ခေါင်း၏ ဖရိန် ၊ ကိုယ်ထည် ၊ ဘိုဂီ ၊ လေလိုင်း ၊ ဝါကင်လိုင်း နှင့် ထိန်းချုပ်ကိရိယာများဖြင့်ပေါင်းစပ်အသုံးပြုကာ ၁၁၀၀ မြင်းကောင်ရေအား ဒုတိယ စက်ခေါင်း (၁)လုံးကို ဆက်လက် တည်ဆောက်ခဲ့ရာ ထိုစက်ခေါင်း တည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက် ပညာပိုင်းဆိုင်ရာတွက်ချက်မှုများစွာဆောင်ရွက်ပြီးအတွေ့အကြုံများစွာလည်း ရရှိစေခဲ့ပါသည်။ ယင်း DD912 စက်ခေါင်းကို ၂၀၀၇-ခုနှစ်တွင် တည်ဆောက် ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။
(၃) တတိယ၁၁၀၀မြင်းကောင်ရေအားDD 908စက်ခေါင်းအဖြစ်ပြောင်းလဲတည်ဆောက်ခြင်း
အင်းစိန်စက်ရုံမှပေးပို့သောတစ်စုံအား DD 912 စက်ခေါင်းတည်ဆောက်ပေးသကဲ့သို့ DD 908 စက်ခေါင်းပေါ်သို့တင်၍ တည်ဆောက်ခဲ့ရာ ၂၀၀၇ခုနှစ်၊သြဂုတ်လတွင် ပြီးစီးခဲ့ ပါသည်။၄င်းစက်ခေါင်း၏ ထူးခြားချက်မှာ Auto Coupler ချိတ်ဆက်စနစ် နှင့် Air Brake အသုံးပြုထားသော စက်ခေါင်းအဖြစ် တီထွင်ပြောင်းလဲတည်ဆောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
( ဃ ) အသေးစားအပေါ့စားစက်ခေါင်းများနှင့်သံလမ်းပြေးယာဥ်များတည်ဆောက်ခြင်း
(၁) LRBE (Loco Rail Bus Engine) သံလမ်းပြေးယာဥ်များ တည်ဆောက်ခြင်း
ရထားပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီး၊ဒုတိယဝန်ကြီးနှင့် ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးတို့၏လမ်းညွှန် ချက်များအရ မြန်မာ့မီးရထားတွင် စက်ခေါင်းမလုံလောက်သဖြင့် လူစီးရထား၊ကုန်ရထားတွင် အသုံးပြုနေသော စက်ခေါင်းများအစား အသေးစား သံလမ်းပြေးယာဥ်များ တည်ဆောက်၍ စက်ခေါင်းကြီးများ နေရာတွင် အစားထိုးနိုင်ရန် သံလမ်းပြေးယာဥ်များအား ပြည်တွင်း စျေးကွက်မှ ဝယ်ယူရရှိသော အင်ဂျင်နှင့် အခြားပစ္စည်းများအား ဝယ်ယူအသုံးပြုပြီး ခရီးသည် များနှင့် ဌာနသုံး သံလမ်းပြေးယာဥ်များအား အောက်ပါအတိုင်း တီထွင် ဆောက်လုပ် ပေးနိုင် ခဲ့ပါသည် -
(5) LRBE 68 - 2003
(6) LRBE 69 - 2003
(7) LRBE 72 - 2004
(8) LRBE 73 - 2004
Diesel Engine Rating - 175 HP
Overall Length - 24' 9"
Max: Height - 10' 6"
(၂) DAL သံလမ်းပြေးယာဥ်များ တည်ဆောက်ခြင်း
(1) DAL 2026 - (2000) (5) DAL 2030 - (2002)
(2) DAL 2027 - (2000) (6) DAL 2031 - (2002)
(3) DAL 2028 - (2000) (7) DAL 2032 - (2003)
(4) DAL 2029 - (2001) (8) DAL 2033 - (2003)
Diesel Engine Rating - 12 HP
Overall Width - 4' 6"
Max: Height - 6' 7"
(၃) MCA သံလမ်းပြေးယာဥ်များ တည်ဆောက်ခြင်း
မြန်မာ့မီးရထားတွင် တိုင်းအဆင့်အရာရှိများ ပူးပေါင်း၍ သံလမ်းပြုပြင်မှုလုပ်ငန်းများ ၊ ရထားပြေးဆွဲမှုလုပ်ငန်းများ စစ်ဆေးရန်အတွက် သံလမ်းပြေးယာဥ်များ လိုအပ်လျှက်ရှိရာ ယခင်က သံလမ်းလုံခြုံရေးအတွက် ကင်းလှည့်ယာဥ်အဖြစ် အသုံးပြုသော MCA သံလမ်းပြေး ယာဥ်များမှာ ကိုယ်ထည်များ ဆွေးမြေ့ပျက်စီးခြင်း၊ အင်ဂျင်မှာ အရန်ပစ္စည်းအခက်အခဲကြောင့် သုံးမရခြင်းတို့ကြောင့် ရပ်တန့် ထားခဲ့ပါသည်။ ၎င်းယာဥ်များအား ပြန်လည် ပြေးဆွဲအသုံးပြု နိုင်ရေး၊ ဒီဇိုင်းပုံစံအသစ်ရေးဆွဲခြင်း၊ ပြည်တွင်းမှဝယ်ယူရရှိသော အင်ဂျင်အားအသုံးပြုနိုင်ရေး၊ ပြုပြင်တည်ဆောက်မှုများအား စက်ရုံဝန်ထမ်းများမှ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ ပုံစံလှပသေသပ် သော MCA သံလမ်းပြေးယာဥ်(၂)စီးအား အောင်မြင်စွာ တည်ဆောက်အသုံးပြုနိုင်ခဲ့ပါသည်။
(1) MCA5- 2003
(2) MCA 16 - 2004
Diesel Engine Rating - 100 HP
Max: Height - 7' 8"
Seating Capacity - 14 Persons
မြန်မာ့မီးရထား၊ မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာဌာန သံလမ်းများ စစ်ဆေးပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းတွင် အသုံးပြုရန်လိုအပ်သော RGC သံလမ်းပြေးယာဥ်ကို ရွာထောင်စက်ရုံမှ တည်ဆောက် ထုတ်လုပ်ပေးရန်တာဝန်ပေးချက်အရ ယခင်က နိုင်ငံခြားမှ အမေရိကန်ဒေါ်လာ(၁)သိန်းကျော် ပေး၍ ဝယ်ယူရသော RGC သံလမ်းပြေးယာဥ်အား ပြည်တွင်းရှိ အမှတ်(၂)စက်မှုဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်လုပ်သော TE 21 Engine အား အသုံးပြု၍ ရွာထောင်ဒီဇယ်စက်ခေါင်းစက်ရုံတွင် တည်ဆောက်ခဲ့ရာ ပြည်တွင်းသုံးငွေ ကျပ်(၁၅၃)သိန်းသာ ကုန်ကျခဲ့သဖြင့် နိုင်ငံခြားငွေများစွာ သက်သာစေခဲ့ပါသည်။
(1) RGC 007 - (2004)
(2) RGC 008 - (2004)
(3) RGC 009 - (2004)
(4) RGC 010 - (2005)
(5) RGC 011 - (2005)
(6) RGC 012 - (2005)
Diesel Engine Rating - 134 HP
Loading Capacity -7Tons
Tare Weight - 12 Tons
(၅) EMC သံလမ်းပြေးယာဥ်(၃)စီး တည်ဆောက်ခြင်း
(1) EMC(D) 26 - 2006
(2) EMC(D) 27 - 2006
(3) EMC(D) 28 - 2006
Max: Height - 8' 6"
Seating Capacity - 16 Persons
(၆) DMU ဒီဇယ်ရထားတွဲဆိုင်း (၅)ဆိုင်းတည်ဆောက်ခြင်း
ရထားပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီး ၊ ဒုတိယဝန်ကြီးနှင့် ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးတို့၏ လမ်းညွှန်ချက် များအရ မြန်မာ့မီးရထားတွင် စက်ခေါင်း မလုံလောက်သဖြင့် လူစီးရထား၊ ကုန်ရထားတွင် အသုံးပြု နေသော စက်ခေါင်းများအစား အသေးစား သံလမ်းပြေးယာဥ်များ တည်ဆောက်၍ စက်ခေါင်းကြီးများ နေရာတွင် အစားထိုးနိုင်ရန် ပြည်တွင်း၌ဝယ်ယူရရှိသော ပစ္စည်းကို အသုံးပြုလျှက် Power Car (၂)စီး နှင့် အလယ်တွင် Trailer Car တစ်စီးပါသော DMU တွဲဆိုင်းအား ရွာထောင်စက်ရုံတွင် ထုတ်လုပ်ခဲ့ ပါသည်။
ထို DMU တွဲဆိုင်းကို ပြည်တွင်းမှ ဝယ်ယူရရှိသောမြင်းကောင်ရေ ၃၀၀)အားရှိ မစ်စူဘီရှီ အမျိုးအစား 8 DC 90 A အင်ဂျင်အားသုံးစွဲတည်ဆောက်ခဲ့ပြီးထိုင်ခရီးသည်(၁၃၀)ဦးနှင့်ရပ်ခရီးသည်(၃၀၀)ဦးစုစုပေါင်း
(၄၃၀)ဦး စီးနင်းနိုင်ပါသည်။ DMU 301 ရထားတွဲဆိုင်းအား ၂၀၀၁-ခုနှစ်၊ဇူလိုင်လတွင်လည်း ကောင်း၊ DMU 302 ရထားတွဲဆိုင်းအား ၂၀၀၂-ခုနှစ်၊ မတ်လတွင်လည်းကောင်း တည်ဆောက် ပြီးစီးခဲ့ပြီး ယခုအခါ မန္တလေး-မုံရွာခရီးစဥ်တွင် နေ့စဥ် ပြေးဆွဲလျှက်ရှိပါသည်။
တတိယမြောက် DMU 304 ရထားတွဲဆိုင်းအား ခရီးသည်ပိုမို တင်ဆောင်နိုင် ရန်အတွက် Power Car (၂)စီး နှင့် Trailer Car (၂)စီးဖြင့် တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး ထိုင်ခရီးသည်(၂၀၀)ဦး၊ ရပ်ခရီးသည်(၃၁၀)ဦး စုစုပေါင်း (၅၁၀)ဦး စီးနင်းနိုင်ပါသည်။
၂၀၀၃-၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် DMU 305 ရထားတွဲဆိုင်းအား ရှေ့နောက် နှစ်ဖက်သို့ မောင်းနှင်နိုင်သော Power Car တစ်စီးနှင့် လူစီးတွဲ(၃)တွဲ ပါဝင်သော ရထား တွဲဆိုင်း အဖြစ် ပြောင်းလဲ တည်ဆောက်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ Power Car ၌ သုံးစွဲခဲ့သည့် Reversing Gear Box အား ရွာထောင်စက်ရုံ၌ပင် တီထွင် ဆောက်လုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ ၂၀၀၅-၂၀၀၆ ခုနှစ်အတွင်း အဆိုပါ တွဲဆိုင်း ဖွဲစည်းမှုအတိုင်း DMU 306 ရထားတွဲဆိုင်းကိုလည်း တည်ဆောက်ခဲ့ပါသည်။
(1) DMU 301 - 2001
(2) DMU 302 - 2002
(3) DMU 304 - 2003
(4) DMU 305 - 2004
(5) DMU 306 - 2006
Diesel Engine Rating - 325 PS
Overall Length - 129' 6"
Max: Height - 10' 8"
Tare Weight (Traction) - 18 Tons
(Trailer) - 12 To­ns
Seating Capacity (Traction) - 60 Persons/Coach
(Trailer) - 70 Persons/Coach
Max: Speed - 40 mph
၉။ ဒီဇယ်စက်ခေါင်းစက်ရုံ စတင်လည်ပတ်ချိန်တွင် အနောက်ဂျာမဏီ၌ ပညာသင်ကြားခဲ့သော အရာထမ်း ၊ အမှုထမ်းများကို အမာခံထား၍ မြန်မာပြည်အရပ်ရပ်မှ လုပ်သားများနှင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် လိုအပ်ချက်များ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းများ မွေးထုတ်နိုင်ရန် အနောက်ဂျာမဏီနိုင်ငံ (ဂျီတီဇက်) (GTZ) အထောက်အပံ့ဖြင့် ရထားစက်မှုသင်တန်း ကျောင်းကိုတည်ဆောက်ခဲ့ရာ ၁၉၈၁-ခုနှစ်၊အောက်တိုဘာလ(၂၄)ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပြီး ရွာထောင်ဒီဇယ်စက်ရုံအတွက်သာမက မြန်မာ့မီးရထားဌာနအတွက်ပါကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းများ မွေးထုတ် နိုင်ခဲ့ပါသည်။
(က) နှစ်နိုင်ငံစတင်ဆွေးနွေးသည့်နေ့ - ၇.၆-၁၉၇၇
( ခ ) စာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးသည့်နေ့ - ၁၃.၇.၁၉၇၉
( ဂ ) အဆောက်အဦပြီးစီးသည့်နေ့ - ၃၁.၁၀.၁၉၈၀
(ဃ ) စက်ကိရိယာများတပ်ဆင်သည့်နေ့ - ၃၁.၃.၁၉၈၁
( င ) စတင်ဖွင့်သောနေ့ - ၂၄.၁၀.၁၉၈၁
( စ ) မြန်မာ့မီးရထားသို့လွှဲပြောင်းသည့်နေ့ - ၁၀.၄.၁၉၈၇
ရထားစက်မှုသင်တန်းကျောင်းတွင် အောက်ပါအတိုင်း သင်တန်းဌာန(၄)ခုထားရှိကာအခြေခံနှင့် အဆင့်မြင့်သင်တန်းများ ပို့ချပေးလျှက်ရှိပါသည် -
( ခ ) အခြေခံ/အဆင့်မြင့်စက်ကိုင်သင်တန်း
( ဂ ) အခြေခံ/အဆင့်မြင့်ဂဟေသင်တန်း
သင်တန်းအလိုက်သင်တန်း ပို့ချလေ့ကျင့်ပေးသည့် ဘာသာရပ်များမှာ -
- Filing (တံစဥ်းတိုက်ခြင်း)
- Marking (အမှတ်အသားပြုလုပ်ခြင်း)
- Sawing (လွှဖြတ်ခြင်း)
- Chiseling (စို့ဖြတ်ခြင်း)
- Shearing (ကတ်ကြေးဖြတ်ခြင်း)
- Drilling (အပေါက်ဖောက်ခြင်း)
- Counter Boring (စောင်းရှူးဖောက်ခြင်း)
- Hand Tapping (ခေါင်းမြှုပ်ပုံဖောက်ခြင်း)
- Diesel Engine Repair Course
- Auxiliary Machine and Brake Repair Course
- Diesel Engine Fuel Injection Pump & Governor Course
- Bogie Course
- Work Shop/ Fitter (စက်မှုဘာသာရပ်)
- Metal (သတ္တုဘာသာရပ်)
- Drawing (ပုံဆွဲဘာသာရပ်)
- Mathematics (သင်္ချာဘာသာရပ်)
- Tool Grinding (စူးဆောက်သွေးသင်တန်း)
- Pneumatic & Hydraulic (နျူမတ်တစ်နှင့်ဟိုက်ဒြောလစ်သင်တန်း)
- Tee Joint
- Flat Position
- Over Head Position
- Fine Thin and Car Body Welding
- Welding Frames Course
- Metal Active Gas Welding (MAG)
- Pneumatic and Electro Pneumatic
- Locomotive Wiring
ရထားစက်မှုသင်တန်းကျောင်းကို ၁၉၈၁ခုနှစ်၊အောက်တိုဘာလ(၂၄)ရက်နေ့တွင်စတင်ဖွင့်လှစ် ခဲ့ရာ သက်တမ်း(၃၂)နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပါသည်။ စက်မှုနှင့်လျှပ်စစ်ဌာနခွဲ လက်အောက်ရှိ ဝန်ထမ်းများအား အခြေခံ နှင့် အဆင့်မြင့် သင်တန်းများ သင်ကြား ပို့ချခဲ့ရာ ယနေ့အထိ သင်တန်းသား စုစုပေါင်း (၄၉၄၂)ဦး ပို့ချပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။
၁­၀။ ဒီဇယ်စက်ခေါင်းစက်ရုံ ၊ ရွာထောင် မှ သာသနာရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများတွင် ထူးခြားစွာ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် လုပ်ငန်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် -
(က) အဘယလာဘမုနိရုပ်ပွားတော်ကြီးပင့်ဆောင်နိုင်ရေး အသုံးပြုရန် ယာဥ်တော်ကြီး တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် ပါဝင်ပင့်ဆောင်ပေးခဲ့ခြင်း၊
( ခ ) ကံတလူဓမ္မစကြာရုပ်ပွားတော်ကြီးပင့်ဆောင်နိုင်ရေး ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်း၊
(က) အဘယလာဘမုနိ ရုပ်ပွားတော်ကြီး ပင့်ဆောင်နိုင်ရေး အသုံးပြုရန် ယာဥ်တော်ကြီး တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် ပါဝင်ပင့်ဆောင်ပေးခဲ့ခြင်း
ရွာထောင် ဒီဇယ်စက်ခေါင်းစက်ရုံ အနေဖြင့် နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲ နှင်‌့ ရထားပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီး၏ တာဝန်ပေးချက်အရ မတ္တရာမြို့နယ် ၊ စကျင်တောင်မှ အဘယလာဘမုနိ ရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီး ပင့်ဆောင်နိုင်ရန် တန်(၆၀၀) အလေးချိန်ခံနိုင် သည့် ယာဥ်တော်ကြီး တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် ရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီးအား မတ္တရာမြို့နယ်၊ စကျင်တောင် မှ ရန်ကုန်မြို့နယ် အင်းစိန်ကြို့ကုန်းရှိ မင်းဓမ္မကုန်းတော် အရောက် ပင့်ဆောင်ရာတွင် လိုက်ပါ၍ ၂၀၀၀-ပြည့်နှစ်တွင် အောင်မြင်စွာ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
တည်ဆောက်သောနှစ် - ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်
Load Capacity - 389 Tons
Tare Weight - 230.8 Tons
No. of Bogies - 16 Nos
No. of Axles - 32 Nos
Axle Load - 19.36 Tons
Length of Carrier - 134'
Width of Carrier - 15'
Height of Carrier - 10' 3-1/2"
Center Distance of2Tracks - 10'
Gauge of Tracks - 3' 3-3/8"
Max: Curvature - 17°
Max: Allowable Speed -5mph
( ခ ) ကံတလူဓမ္မစကြာရုပ်ပွားတော်ကြီးပင့်ဆောင်နိုင်ရေး ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်း
ဒီဇယ်စက်ခေါင်းစက်ရုံ ၊ ရွာထောင် အနေဖြင့် စစ်ကိုင်းတိုင်း အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ကောင်စီ၏ တာဝန်ပေးချက်အရ မတ္တရာမြို့နယ်၊ စကျင်တောင်မှ စစ်ကိုင်းမြို့နယ် ၊ ကံတလူဘုရား ပရဝုဏ်သို့ ဓမ္မစကြာ ရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီးအား ပင့်ဆောင်နိုင်ရေးအတွက် ပါဝင်၍ ၂၀၀၃-ခုနှစ်တွင် အောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။